KEDU ESI EME KA ANWỤRỤ ỌKỤ NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Kedu esi eme ka anwụrụ ọkụ na Photoshop
Market Market bụ otu n'ime njikọ ndị dị na sistemụ arụmọrụ site na Google, n'ihi na ọ bụ maka ya na ndị ọrụ na-achọta ma wụnye egwuregwu na ngwa ọhụrụ, ma mezie ha. N'ọnọdụ ụfọdụ, akụkụ a dị mkpa nke Os na-akwụsị ịrụ ọrụ nke ọma, na-ajụ ịrụ ọrụ isi ya - nbudata na / ma ọ bụ imelite ngwa. Esi kpochapụ ụdị nsogbu a, anyị ga-agwa anyị ihe anyị ga-eme taa.
Gini mere Google Play Market ji arụ ọrụ?
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla na arụ ọrụ nke Ụlọ Ahịa Ụlọ ahịa na-ejikarị windo na-esonye na ọkwa nke edepụtara nọmba njehie ahụ. Nsogbu bụ na akara ama akara a ekwughị ihe ọ bụla nye onye ọrụ nkịtị. N'agbanyeghị nke ahụ, ekwesighi iwe iwe - ihe ngwọta, ma ọ bụ kama nke ahụ, nhọrọ dịgasị iche, achọpụtawo ogologo oge.
Na ngalaba pụrụ iche nke saịtị anyị, ị nwere ike ịchọta ntụziaka zuru ezu maka iwepụ ihe ka ọtụtụ n'ụlọnga ikike (na ntinye koodu) nke njehie Market Market. Soro njikọ dị n'okpuru ebe a iji chọpụta ihe maka nsogbu gị. Ọ bụrụ na ọ nweghị njehie ị zutere (dịka ọmụmaatụ, ọ nwere nọmba dị iche ma ọ bụ na ọ dịghị emetụta ya ma ọlị), chọpụta ụzọ dị n'isiokwu a. N'ọtụtụ n'ime ha, anyị ga-ezo aka na ntụziaka dị ugbu a.
Gụkwuo: Ịkwụsị njehie Market Market
N'agbanyegh i nsogbu a di na njikwa usoro Android ma obu ihe ndi ozo, enwere ike idozi ya mgbe ufodu site na nchibido ntanye ngwaọrụ. Ma eleghị anya, nke a ma ọ bụ njehie nke Play Market bụ naanị nwa oge, otu ihe ndabara, na iji weghachite ọrụ ya, ị chọrọ ịmalitegharịa usoro ahụ. Mee nke a, ma gbalịa iji Ụlọ Ahịa ahụ ọzọ ma wụnye ma ọ bụ melite ngwanrọ nke njehie ahụ mere n'oge gara aga.
Gụkwuo: Otu esi agbanye ngwaọrụ na gam akporo
Ọ bụrụ na malitegharia enyerela aka, ma eleghị anya Ahịa anaghị arụ ọrụ maka ihe ọzọ dị mkpa, dịka enweghị ma ọ bụ enweghị mma nke Intanet. Lelee ma nyefee data ma ọ bụ Wi-Fi na ngwaọrụ gị, nakwa otú ejikọta njikọ na weebụ weebụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ma ọ bụrụ na o kwere omume, jikọọ na ebe ọzọ ịnweta (maka netwọk ikuku) ma ọ bụ chọpụta mpaghara nke nwere mkpuchi ụlọ nchekwa.
Lelee ogo na ọsọ nke njikọ Ịntanetị
3G / 4G internet internet enyere
Otu esi emeziwanye ogo na ọsọ nke Intanet
Ihe ikpeazụ ị ga - eme tupu ịmalite ịmepụta ozugbo na Ụlọ Ahịa bụ ịlele ụbọchị na oge na ngwaọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala otu n'ime ntọala ndị a ka edoziri na-ezighi ezi, sistemụ arụmọrụ agaghị enwe ike ịkpọtụrụ ndị sava Google.
Meghee "Ntọala" ngwaọrụ mkpanaka gị ma lee anya na ndepụta nke ngalaba dịnụ "Ụbọchị na Oge". Na nsụgharị nke gam akporo, a na-ezobe ihe a na ngalaba. "Usoro".
Gaa na ya ma jide n'aka na ụbọchị na oge a ga-ekpebi na-akpaghị aka na kpọmkwem ka ọ ga-adị na eziokwu. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, megharịa ya n'ihu ihe ndị kwekọrọ na ya na ọnọdụ nọ n'ọrụ, ma hụkwa na mpaghara mpaghara gị dị n'okpuru ebe a.
Malitegharia ngwaọrụ gị, wee gbalịa iji Ụlọ Ahịa Play.
Ọ bụrụ na ndụmọdụ ndị dị n'elu n'elu anaghị enyere aka dozie nsogbu dị ugbu a, gaa n'ihu na-emejuputa ihe omume ndị e depụtara n'ihu na ederede.
Rịba ama: Mgbe ịmechara nkwụsị nke onye ọ bụla n'ime ụzọ ndị a, anyị na-akwado ka ị malitegharịa ama ama ma ọ bụ mbadamba, ma mgbe ahụ jiri Ụlọ Ahịa Play iji chọpụta ma nsogbu ndị dị n'ọrụ ya apụla.
Nzọụkwụ 1: Data Cleaning and Work with Play Store Updates
Mgbe ịchịrị na nhazigharịa ihe ndị ahụ doro anya n'ụzọ ziri ezi, ị ga-aga na Market Market, n'enweghị nsogbu. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ bụ akụkụ dị mkpa nke sistemụ arụmọrụ, n'ụzọ zuru oke na ọ bụ otu ngwa dị ka ndị ọzọ. N'ime oge dị ogologo, Ụlọ Ahịa ahụ na-enweta ihe mkpofu faịlụ, data na-ezighị ezi, nke a ga-ehichapụ. Omume dị otú ahụ dị mfe bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa (na mgbe naanị) iji wepu njehie nọmba.
Gụkwuo: Na-ehichapụ data na oghere na Play Market
Malitegharia ngwaọrụ gi, wee gbalịa jiri Store Store. Ọ bụrụ, mgbe ị na-ehichapụ data na cache, agaghị eweghachi ọrụ ahụ, ị ​​ga-ahụ na emelitela ya na nsụgharị ọhụrụ ugbu a. N'ọtụtụ ọnọdụ, mmelite bịa ma wụnye na akpaghị aka, ma mgbe ụfọdụ, ha nwere ike ịme nkwarụ.
Ngwa imelite na gam akporo
Otu esi emelite Market Google Play
Nchọpụta nsogbu Ngwa
N'enyeghị ya nsogbu, ihe kpatara enweghị ike ịnweta Market Market nwere ike ịbụ nke ọzọ, ya bụ, mmelite ya. N'okwu ndị na-adịghị adị, mmelite arụnyere na-ezighị ezi ma ọ bụ naanị nwere njehie na nchinchi. Ma ọ bụrụ na nsogbu na Google App Store na-akpata site nwelite ọhụrụ, ịkwesịrị ịgbanyeghachi ya. Anyị edeworị banyere otu esi eme nke a.
Gụkwuo: Wepụ Ngwa Mmiri Play
Nzọụkwụ 2: Data Ịchacha na Tọgharia Ọrụ Google Play
Ọrụ Google Play bụ ihe ọzọ dị mkpa nke gam akporo os. Ọ na-eme ka a hụ na ọrụ Google na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị, gụnyere ahịa ahịa ogologo ntachi obi. Dị ka nke ikpeazụ ahụ, Ọrụ ahụ ga-anapụkwa oge, nweta data na-enweghị mkpa na cache, nke na-egbochi ọrụ ha. A chọrọ ihe a nile ka ihichapu n'otu ụzọ ahụ dị ka ọ dị na ụlọ ahịa ngwa, wee malitegharịa ama ma ọ bụ mbadamba. A na-atụlerịrị algorithm maka ịme usoro a dị mfe.
Gụkwuo: Ihichapụ data na nche nke ọrụ Google Play
Yiri Market Market na ngwa ngwa ndị ọzọ, ọrụ Google na-emelite kwa mgbe. Nsogbu a na-atụle na usoro nke isiokwu a nwere ike ime ka nwelite arụnyere na enweghịzi ya na sistemụ arụmọrụ. Dichapụ mmelite Mgbasaozi, regharịa ngwaọrụ ahụ, wee chere ka ngwa ahụ melite na-akpaghị aka ma ọ bụ aka. Isiokwu anyị ga-enyere gị aka mezue usoro a.
Weghachite mmelite na ọrụ Google Play
Ọrụ Nwelite Ọrụ Google
Nzọụkwụ 3: Dị ọcha na Tọgharịa Ọrụ Omenala Google
Okpokoro Ọrụ Microsoft bụ ihe ọzọ dị mkpa nke na, dị ka akụkụ usoro ihe a kpọtụrụ aha n'elu, nwere ike imetụta ọrụ nke Play Market. Ịkwesịrị ịme otu ihe ahụ - buru ụzọ kpochapụ data na cache a chịkọtara n'oge a na-eji ya, wee tụgharịa mmelite ahụ, gbanwee ma chere ka ha rụọ ọrụ na akpaghị aka. A na-eme nke a n'otu ụzọ ahụ dịka ya na ndị ọzọ niile, gụnyere ngwa ndị a tụlere n'elu. Nanị ihe dị iche bụ na na ndepụta nke arụnyere, ịkwesịrị ịhọrọ Ụlọ Ọrụ Ọrụ Google.
Usoro 4: Mee ka Akaụntụ Google rụọ ọrụ
Akaụntụ Google na gam akporo Android na-enye ohere ịnweta ngwa na ọrụ niile, ma na-enye gị ohere ịmekọrịta ma chekwaa ozi dị mkpa na ígwé ojii. Maka nzube ndị a, usoro sistemụ na-enye ngwa dị iche - Akaụntụ Google. Maka ụfọdụ, mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ nke onwe ha na-eji aka ha eme ihe, nke a dị mkpa nke Os nwere ike ịda mbà. Iji weghachite Market Market, ọ ga-adị mkpa ka emegharịa gị.
Meghee "Ntọala" ngwaọrụ mkpanaka gị ma gaa "Ngwa".
N'ime ya mepee ndepụta nke ngwa niile ma ọ bụ usoro iche iche (ọ bụrụ na inye ihe dị otú ahụ) wee chọta ebe ahụ Akaụntụ Google. Kpatụ ihe a ka ị gaa na ibe ozi izugbe.
Ọ bụrụ na ejiri ngwa ahụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Kwado". Tụkwasị na nke a, ịkwesịrị ikpochapụ cache, nke a na-enye bọtịnụ iche.
Rịba ama: Na ngwaọrụ ndị dịtụ ọhụrụ, gụnyere mbipụta ọhụrụ nke gam akporo, iji kpochapụ oghere, ị ga-ebu ụzọ gaa na ngalaba ahụ "Nchekwa" ma ọ bụ "Nchekwa".
Dịka na usoro niile gara aga, malitegharia ama ama ma ọ bụ mbadamba nkume mgbe ị na-arụ ọrụ a chọrọ.
Mgbe ịmalitere sistemụ ahụ, gbalịa jiri Ụlọ Ahịa Play.
Usoro 5: Hazie Nchịkọta Download
Download Manageragbakwunyere n'ime sistemụ arụmọrụ, dịka Akaụntụ Google nwere nsogbu, nwere ike ịbụ otu n'ime ihe ndị Ụlọ Ahịa Ụlọ Ahịa jụrụ ịrụ ọrụ. Dị ka ọ dị na ụzọ gara aga, ị ga-enyocha ma ọ bụrụ na agbanyere usoro a nke os, ma n'otu oge ka ịchọta ya. A na-eme nke a dịka akọwara na usoro mbụ, naanị ọdịiche dị na aha ngwa ahụ achọrọ.
Usoro 6: Na-arụ ọrụ na akaụntụ Google
Na usoro nke 4, anyị edeworị banyere uru akaụntụ Google dị na sistemụ arụmọrụ, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na njikọ a, karịa, nsogbu ya, nwere ike imetụta ọrụ nke ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ nweghị ngwọta nke anyị nyere aka nyere aka weghachite ọrụ arụmọrụ Play Market, ịkwesịrị ihichapụ isi akaụntụ Google site na ngwaọrụ mkpanaka gị ma weghachite ya ọzọ. Anyị dere banyere otu esi eme nke a n'otu isiokwu isiokwu.
Ọ dị mkpa: Iji mee omume ndị a, ọ dị mkpa ka ị mara ọ bụghị naanị nbanye site na akaụntụ ahụ, kamakwa paswọọdụ ya. Kpachara anya ma ghara imehie mgbe ị banyere.
Gụkwuo: Ihichapụ na kọghachite akaụntụ Google
Usoro nke 7: Wepu nje ma dezie faịlụ ndị agha
Nhọrọ ndị a kọwara n'elu ga-aba uru ma ọ bụrụ na nje edozila n'ime sistemụ. Ee, gam akporo anaghị adị mfe ka ọrịa karịa Windows, ma mgbe ụfọdụ ọ ka na-eme. Algorithm nke omume n'ime ọnọdụ ndị dị otú ahụ adịghị dị iche na ihe niile anyị na-eme na kọmpụta ahụ: ọ dị mkpa ka a nyochaa OS site na antivirus, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ pests, ọ bụghị nanị iwepu ha, ma kpochapụ faịlụ nke ndị na-enweghị isi. Ihe a niile ka anyị dere na nyocha anyị na isiokwu ndị dị na Play Market.
Antivirus maka gam akporo
Na-edezi faịlụ ndị agha na gam akporo
Usoro 8: Ụlọ ọrụ Tọgharia
Ọ dị oke ụkọ, ma ọ ka na-eme na ọ dịghị ụzọ ọ bụla e kwuru n'isiokwu a nwere ike idozi nsogbu na Play Market. Site n'ọnọdụ dị otú ahụ na-adịghị mma, ọ gaghị ekwe omume imelite ngwa na egwuregwu, ma ọ bụ ibudata ndị ọhụrụ, ya bụ, ngwaọrụ mkpanaka ga-efunahụ ọtụtụ ọrụ ya.
Ọ bụrụ na enwere nsogbu ndị ọzọ na gam akporo, anyị nwere ike ikwu ịtọgharịa ya. Otú ọ dị, a ghaghị ịghọta na usoro a gụnyere iwepụ kpamkpam ozi data na faịlụ, faịlụ awụnyere na ihe ọ bụla na-esiteghị na ngwaọrụ ahụ. Anyị na-akwado ike ịmepụta nkwado tupu ịme ya.
Ntọgharịa ntọala ngwaọrụ gam akporo
Gbanwee ntọala ntọala maka Samsung smartphones
Data ndabere na gam akporo
Alternative: Ịwụnye ụlọ ahịa atọ
Usoro anyị chọrọ iji wepụ nsogbu ọ bụla na arụ ọrụ Ụlọ Ahịa Play. A na-akwado usoro a n'elu maka iji naanị mgbe enwere nsogbu ndị ọzọ, njehie na / ma ọ bụ malfunctions na ọrụ nke ngwaọrụ mkpanaka gam akporo. Ọ bụrụ na ịnweghị ịchọ ịchọ ihe mere Market Play adịghị arụ ọrụ ma wepụ ya, ị nwere ike ịwụnye otu n'ime ụlọ ahịa ngwa ndị ọzọ ma jiri ya.
Gụkwuo: Analogs nke Ụlọ Ahịa Google
Dịka ị pụrụ ịhụ, e nwere ezigbo ihe mere Market Market anaghị arụ ọrụ na gam akporo. Ọ dabara nke ọma, onye ọ bụla n'ime ha nwere nhọrọ nkwụsị nke aka ya, ọbụlagodi ka o yikarịrị ka ọ ga-eme ka ịlụso nsogbu ahụ ọgụ. A ghaghị ịrụ usoro ndị anyị na-etinye n'ime usoro ihe a, ebe ọ bụ na ọkara nke mbụ ha bụ ihe na-adịkarị mfe ma dị mfe, nke abụọ bụ ọnọdụ pụrụ iche na nkwụsị nke oge ọ bụla nke a na-adịghị ahụkarị. Anyị nwere olileanya na isiokwu a enyerela gị aka nwetaghachi ụlọ ahịa ngwa ngwa mkpanaka gị.